Sorona Masina ny 13/10/2019 - Fihirana Katolika Malagasy
Sorona Masina ny 13/10/2019
ALAHADY FAHA-28 mandavantaona — D
MAHAIZA MANKASITRAKA AN’ANDRIAMANITRA
Mihanta aminao izahay, ry Tompo: enga anie hitari-dalana anay mandrakariva ny fahasoavanao, sy hanampy anay harisika lalandava hanao ny tsara.
Boky faharoan’ny Mpanjaka
2 Mpanj. 5, 14-17
Niverina nankao amin’ilay olon’Adriamanitra i Naamàna, nino ny Tompo.
Tamin’izany andro izany, i Naamàna sirianina nidina ka nisitrika impito tao Jordany araka ny tenin’i Elisea olon’Andriamanitra, ary tonga toy ny nofon-jazakely indray ny nofony ka nadio izy. Dia niverina nankao amin’ilay olon’Andriamanitra izy mbamin’izay rehetra nomba azy. Ka nony tonga, dia nandroso teo anatrehany, nanao hoe: “Indro hitako tsara izao, fa tsy misy Andriamanitra amin’ny tany rehetra afa-tsy eto amin’i Israely ihany! Koa ankehitriny, dia aoka handray ny fanatitra avy amin’ny mpanomponao ianao”. Fa hoy i Elisea: “Velona ny Tompo izay itoerako eo anatrehany, ka dia tsy handray mihitsy aho”. Mbola nanery azy handray ihany i Naamàna, nefa tsy nety izy. Ka hoy i Naamàna: “Rehefa tsy mety ianao, dia avelao kosa ny mpanomponao mba homena tany zakan’ny mole roa, satria tsy tian’ny mpanomponao intsony, ny manatitra sorona dorana na sorona amin’andriamani-kafa, afa-tsy amin’ny Tompo Andriamanitr’i Israely”.
Fiv.: Naneho ny fahamarinany tamin’ireo firenena ny Tompo.
Nahariharin’ny Tompo ny famonjeny, hitan’ireo firenena ny fahamarinany. Tsarovy, ry terak’i Israely, ny fitiavany sy ny fahamarinany!
Zahao, ry vazan-tany rehetra, ny famonjen’ny Andriamanitray. Hobio ny Tompo, ry tany tontolo; mientàna, miantsà sy mihobia.
Taratasy faharoan’i Md. Paoly Apôstôly ho an’i Timôte
Raha miaritra isika, dia hiara-manjaka amin’i Kristy.
Ry zanako malala, tsarovy fa i Jesoa Kristy Tompo, ilay avy amin’ny taranak’i Davida, dia nitsangan-ko velona araka ny Evanjely torîko, izay iaretako fijaliana hatramin’ny fatorana toy ny olon-dratsy aza; ny tenin’Andriamanitra anefa tsy mba voafatotra. Noho izany, dia miaritra ny zavatra rehetra aho, noho ny amin’ny olom-pinidy, mba hahazoan’izy ireo koa, ny famonjena izay ao amin’i Kristy Jesoa mbamin’ny voninahitra mandrakizay. Teny mahatoky tokoa izao: “Raha miara-maty aminy isika, dia hiara-belona aminy koa; raha miaritra isika, dia hiara-manjaka aminy; raha mandà Azy isika, dia Izy koa handà antsika; raha mivadika isika, Izy tsy mivadika na oviana na oviana, fa tsy mahazo mandà ny Tenany Izy”.
Tsy nisy niverina nanome voninahitra an’Andriamanitra raha tsy io vahiny io.
Tamin’izany andro izany, raha nandeha ho any Jerosalema i Jesoa, dia nanara-tsisina an’i Samaria sy i Galilea. Ary raha niditra tao amin’ny vohitra anankiray Izy, dia nifanena tamin’ny boka folo lahy izay nijanona teny lavidavitra teny. Dia niantso izy ireo ka nanao hoe: “Ry Jesoa Mpampianatra ô, mamindrà fo aminay!” Vantany vao nahita azy ireo Izy, dia nanao hoe: “Mandehàna, misehoa amin’ny mpisorona”. Ka nony nandeha ho any izy ireo dia sitrana teny am-pandehanana. Ary ny anankiray tamin’ireny, rehefa nahita fa sitrana izy, dia niverina ka nankalaza an’Andriamanitra tamin’ny feo mahery. Niankohoka tamin’ny tongotr’i Jesoa izy, dia nisaotra Azy; ary Samaritanina izy io. Dia niteny i Jesoa ka nanao hoe: “Moa tsy folo lahy va no nadio? Ka nankaiza àry ny sivy? Ny vahiny indray ity no hany niverina tamin’izy ireny mba hankalaza an’Andriamanitra!” Dia hoy Izy taminy: “Mitsangàna, ary mandehàna, fa ny finoanao no nahavonjy anao”.
Ry kristianina havana, mampiray ny olombelona ny fitiavana, ary mampitombo ny fihavanana ny fahaiza-mankasitraka; koa miaraha mivavaka mba samy hameno ny fon’ny olombelona mandrakariva ny fitiavana sy ny fahaiza-mankasitraka na amintsika samy olombelona, na indrindra amin’Andriamanitra.
Valy: Hankalazaina mandrakizay ny Anaranao, ry Tompo.
* Mivavaha ho an’ny Eveka sy ny Pretra mba hahatàomany olombelona, hahay hankasitraka an’Andriamanitra amin’ny zavatra rehetra.
* Mivavaha ho an’ireo miandraikitra ny fanampiana ny ory sy ny mijaly eo amin’izao tontolo izao, mba hanampian’Andriamanitra azy, hahita izay famonjena ilaina sy hahay hizara azy, ka hampitodika ny fon’ireo vonjeny any amin’Andriamanitra fototry ny soa rehetra.
* Betsaka ny marary hoditra sy voan’ny homamiadana sy ny SIDA: mijaly sy manaintaina; koa mivavaha mba tsy hafoin’ny olona izy, fa hokolokoloiny sy hotiaviny ary hotarihiny ho any amin’Andriamanitra mba hisolo hafaliana ny fijaliana iaretany.
* Mahay mangataka isika nefa tsy mba mahay mankasitraka firy ny soa rehetra omen’Andriamanitra; koa ampakaro izao vavaka izao ho fisaorana Azy avy amintsika vory etoana sy ny olombelona rehetra.
* Efa hanomboka ny fianarany any an-tsekoly ny ankizy sy ny tanora amin’izao fotoana izao, koa mangataha mba harisika mandrakariva ny mpianatra ary ho vonona hiomana lalandava amin’ny fiainana miandry azy.
Ray ô, mahery midodododo aminao izahay rehefa sahirana na misy manjò; fa mahalana vao mba misaotra; koa raiso izao fisaorana izao, ary ampianaro izahay hankasitraka ny fanomezanao rehetra: tsy ny soa mandalo ihany, fa indrindra ny aina omenao sy ny fitiavana asehonao.
Prefasy: Alahady tsotra V, ohatra.
Ny tremalahy tonga mahantra sy noana: fa izay mitady ny Tompo tsy orin-tsoa.
Eugene Hery - Tel +39 338 744 2412 (Italie) - [0.0693 s.] - Hanohana anay